Yintoni edla e Horukon Iqela loqwalaselo le pa parlour
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Yintoni edla e Horukon Iqela loqwalaselo le pa parlour
Uqwalaselo qela, ekhawulelana umqondiso jackpot ukusuka uqwalaselo iHolo ukuze iqela ngalinye liya kuba lowo bazicima jackpot. IsiCwangciso-qhinga kweholo conserver capture, into eye kwinethiwekhi wacinga. Apha, i conserver eholweni usibona capture, sifuna ukuba angenise loku waziwa njengomzekelo eqhelekileyo kuqwalaselo qela.
Uqwalaselo Iqela kwi capture eholweni conserver, isiphelo inombolo uqwalaselo, kwicala-by-icala uqwalaselo, kuthiwa ukuba kukho iintlobo ezintathu loqwalaselo engagunyaziswanga. Phakathi kwabo, uqwalaselo kuthiwa kuzwelonke kakhulu ezinkulu, kwicala-by-kwicala loqwalaselo kwaye uye ezahlukahlukeneyo obizwa ngokuba isiphelo uqwalaselo, kodwa akazi ukuba nguwo lowo ngokusesikweni kwiimeko ezininzi.
kukuba le uqwalaselo yeyona ixhaphakileyo, kwicala-by-icala uqwalaselo kwakhona isiphelo uqwalaselo kwakhona, kubonakala ukuba le nto ukuba kulula ukuqinisekisa ngenxa yokuba kulula na ukuluqonda. Ngenxa yokuba ayikho yokuba isiqinisekiso pa parlour ingahoywa, iye yaba yinto eyayiza kuba njalo uqikelelo.
kwimeko lesiphelo uqwalaselo, ekupheleni kwetafile apho idityaniswe inombolo sombane liqonga efanayo ziya kuba iqela elinye. 1 iqela kubonakala emihlanu kalukhuni. Umzekelo, kwi iiyunithi 20 siqithi, kuya kuba into yokuba amaqela amahlanu kukho esiqithini.
gidi, ngenxa yokuba iye yenziwa kulo lonke pa parlour iya kuba isikhalazo kwi-capture eholweni conserver. Ngaba bekuya kuba kakhulu rhoqo, icala-by-icala uqwalaselo, kwicala-by-icala, uye waba amaqela ezine ukuya kwezintlanu, xa ngokuphumelela ilotto jackpot, isibakala sokuba jackpot kuwo abelwa kuni.
Noko ke, kwiminyaka yakutshanje, kuthiwa ukuba kukho o parlour le elisetyenziswa lesiphelo loqwalaselo kunye icala elingenzi nto-by-icala uqwalaselo. Ukuba icala elingenzi nto-by-kwicala yoqwalaselo kunye nesiphelo uqwalaselo zixubene, ngoko ke kufuneka ezhlukileyo siqithi, siya kumisela kuthiwa kuba nzima ngakumbi kancinane. Phakathi
nesendlu pa, kwaye kwisiqithi kwicala-by-icala uqwalaselo, ukususela kwisiqithi sisimo isiphelo zixubene, oko kuthiwa ukuthatha ixesha lokuba uphando xa jackpot sele yenzekile. eli qela division -Loop kakhulu nokuba imifuziselo ezinjalo, aze ke ziye zifakwe apha ukuma kuphela inani, mna into jackpot lwenzeka rhoqo ngaphakathi kwiqela elinye.
Kodwa kutshanje, zininzi, nesendlu pa ukuba ziseke enye transformer ukuya kwenye ukwenzela ukuthintela inkathazo. Kule nto, oko wacacisela ubukho liQela eliCebisayo ukuba saba ukubambelela.
ingcamango yeqela uqwalaselo, kulindeleke ukuba inani isiseko jackpot akukho isizathu kwenzeka nje ukuba kunye. Evenkileni pa kuhamba nani, ukuba okanye hayi loqwalaselo iqela ekubhekiswa kulo kwedatha kwiholo conserver lusekiwe, kusenokuba umdla jonga kanye.